Iimbono eziphefumlayo zolwandle kunye nesanti ekumgama nje omfutshane. Ihlaziywe ngokupheleleyo ngezixhobo zombane ezisemgangathweni, ifanitshala, i-wifi, iNetflix, i-air con kunye nelinen yodidi. Vuka uye kwizandi zolwandle kwaye ujonge elundini phayaa kwaye emva kwemini uyonwabele isiselo kwibalcony okanye kwiSurf Club edumileyo ngaphaya kwendlela.
Paka imoto yakho egaraji kwaye uyishiye apho njengoko ilixesha lokuba ucime kukuphithizela!
Indlu yokulala ye-2 inombono wamanzi kwaye iyingxenye ye-4 complex complex. Ikumgangatho wokuqala, ukuya phezulu kwizinyuko ezimfutshane. Indawo lunxweme lwangoku kunye nephalethi ye-oki, irattan enemiphetho emhlophe qhwa kulo lonke. Injongo yethu kukwenza indawo engcwele ekhululekileyo eziva imema kakhulu kwaye ikhululekile kwiindwendwe zethu.
Amagumbi okulala afakwe kwikhaphethi ezakhiwe ngeengubo. Indawo yokuhlala ibandakanya ikhitshi, indawo yokuhlala kunye neendawo zokutyela ezivuleleke kwibalcony. Unxibelelwano lomoya, iWifi kunye neNetflix ziqinisekisa ukuba zonke iziseko zigqunyiwe. Kukho usapho lwe-Weber BBQ kwibalcony elungele isidlo sangokuhlwa kunye nokuphumla ngelixa ubukele ulwandle kunye nobomi baselwandle.
Kukho igaraji yokutshixa enye enendawo yemoto enye. Kuya kuba nendlu yeekayak zabantwana ezi-2 ukuze zisetyenziswe kwiindwendwe.
Unxweme oluphambili lwe-South West Rocks lubekwe ngqo phambi kweflethi kwaye iHorseshoe Bay ikwicala lasekhohlo leklabhu ye-surf yendawo (kwelinye icala le-headland). Ezi ziilwandle zokuqubha ezigadiweyo kulo lonke ihlobo kwaye zithandwa ziintsapho ngenxa yokuzola kwamanzi nacwengileyo. I-Trial Bay kufuneka yenziwe kwiintsapho, ngokhuseleko lokugqibela ekudumbeni idala indawo egqibeleleyo yokuqubha nabantwana abancinci.
IiCafes, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zonke zikumgama omfutshane kwaye kukho iindlela ezininzi zokuhamba kunye neebhayisekile.
UChris uya kufumaneka ukuba unxibelelane naye ngetekisi nangefowuni ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Ukuba uyakonwabela ukuhlala kwakho, siyakuxabisa ngokwenene ukuba uthathe ixesha lokuphonononga indlu yethu njengoko siyixabisa ingxelo yakho.
UChris uya kufumaneka ukuba unxibelelane naye ngetekisi nangefowuni ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Ukuba uyakonwabela ukuhlala kwakho, siyakuxabisa ngokwenene ukuba uthathe i…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-3612
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- South West Rocks